RF fampidirana brazing | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
teknolojia fivarotana sy varotra teknolojia
Ny rafitra fanamafisana HLQ induction dia rafitra miampy sanda izay afaka miditra mivantana ao amin'ny sela mpamokatra, mampihena ny fako, fako ary tsy mila fanilo. Ny rafitra dia azo alamina ho an'ny fifehezana ny tanana, semi-automated ary hatrany amin'ny rafitra mandeha ho azy tanteraka. Ny rafitra famonoana brazing sy soldering HLQ dia manome hatrany ny firaisana tsy madio sy tsy misy rano ... Hamaky bebe kokoa
Sokajy FAQ, Technologies Tags haavo matetika, indostrian'ny brazer, induction brazing, induction brazing system copper, induction brazing machine, mpanamboatra brazing mpanamboatra, rafitra fanetren-tena, vondron-trano fandrobohana, induction soldering, MF miteraka, Masinina mandroba MF, fandefasana radio matetika, fampandehanana radio matetika, RF induction
Nahoana no misafidy ny fampidiran-dra?
Ny teknolojia fanamafisana induction dia manala hatrany ny lelafo sy ny lafaoro misokatra ho loharanom-pahavoazana tiany amin'ny famonoana. Antony fito lehibe no manazava ity fitomboan'ny laza ity:
1. Vahaolana maivana
Ny fanafanana induction dia mamindra angovo bebe kokoa isaky ny milimetatra toradroa noho ny lelafo misokatra. Raha tsorina, ny induction dia afaka mandresy ampahany betsaka kokoa isan'ora noho ny fomba hafa.
2. Vita haingana
Ny induction dia mety amin'ny fampidirana an-tserasera. Tsy mila esorina intsony ny andiana ampahany na alefa hanao brazing. Ny fanaraha-maso elektronika sy ny kodiarana namboarina dia avelao hampifangaro ny fizotran'ny famonoana amin'ny fizotry ny famokarana tsy misy tohika.
3. Fanatanterahana tsy tapaka
Ny fanafanana induction dia azo fehezina sy azo averina. Ampidiro ao amin'ny fitaovana fampidirana ireo masontsivana izay tadiavinao, ary hamerina ireo tsingerin'ny fanamainana izy ireo amin'ny familiana tsy azo tsinontsinoavina fotsiny.
4. Toe-draharaha tokana
Ny induction dia mamela ny mpandraharaha hijery ny fizotran'ny famonoana, zavatra sarotra amin'ny lelafo. Ny fanamainana sy ny hafanana marina dia mampihena ny loza ateraky ny hafanana be loatra, izay miteraka tonon-taolana malemy.
5. Toeram-piompiana mamokatra kokoa
Ny lelafo misokatra dia mamorona tontolo iainana tsy mahazo aina. Mijaly ny vokam-pitondran-tena sy ny vokatra vokatr'izany. Mangina ny fampidirana. Ary saika tsy misy fiakarana ny maripana manodidina.
6. Ataovy ny asanao miasa
DAWEI Fitaovana fanaovana brazing induction dia manana dian-tongotra kely. Miorina mora foana ao amin'ny sela famokarana sy ny lamina misy ireo gara miorina. Ary ny rafi-pitantanana finday sy finday dia mamela anao hiasa amin'ny faritra sarotra idirana.
7. Tsy misy fifandraisana amin'ny olona
Ny induction dia mamokatra hafanana ao anatin'ny metaly ifotony - ary tsy misy toeran-kafa. Dingana tsy misy fifandraisana izany; ny metaly fototra tsy nifandray tamin'afo mihitsy. Izy io dia miaro ny metaly ifotoran'ny ady, izay mampitombo ny vokatra sy ny kalitaon'ny vokatra.
Sokajy FAQ Tags tombony amin'ny fampidirana loto, fampidiran-doha, fampiasana hafanam-be avoaka, igbt induction, RF induction, Nahoana no tsara kokoa ny fahasitranana, Nahoana no misafidy ny fampidiran-dra?
tanjona: Induction Brazing diamondra insert ho an'ny peratra boribory vy
Fitaovana : • bozaka vy sy diamonda diamondra • Fikirakira ny alim-bosotra • Flux
Temperature:1300 - 1350 (700 - 730) ° F (° C)
fitaovana: DW-HF-15kW, rafitra fanamorana ny induction, izay misy seranan-tsambo hafahafa iray misy kapitalista roa 0.5 μF (total 0.25 μF). Ny famolavolan'ny kodiaran-trano fanorenana natokana sy novolavolaina manokana ho an'ity fampiharana ity.
Process: Ny bobongam-bolo mivelatra sy ny ivelany (ivelany) ivelany dia ampiasaina mba hamolavolana modely ilaina. Ny fanandramana voalohany eo amin'ny peratra irery dia mamaritra ny fampifanarahana amin'ny rafitra. Ny Flux dia ampiharina amin'ny ampahany ary ny kofehy varahina dia ampidirina ao anaty lavaka mifanohitra (b). Izany dia arahin'ny diamondra synthetic. Ny ampahany dia entina ao anaty kodiarana ary ny lanjany dia apetraka eo amin'ny diamondra (C). RF Induction Ny herinaratra fampidinana dia ampiharina mandra-pahafatiny. Voafehy ny herinaratra ary manaloka ny mari-pana ny habaka.
Vokatra / tombony • Mitombo ny fanenjehana ny peratra raha oharina amin'ny fanasitranana famonoana afo • Nihena ny vanim-potoan'ny fiaramanidina noho ny fihenan'ny famerenan-dàlana sy ny famerenana
Sokajy Technologies Tags haavo matetika, haingam-pandehan'ny hafanana, indraindray, Fampidiran-drivotra diamondra, diamondra matevina, RF diamonds rots, RF induction, RF rafitra fanodinana RF, RF induction lozotra
Masinina manamafy ny maotera
Masinina famonoana induction